शव कुल्चदै चढ्नु पर्छ हिमाल... - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
शव कुल्चदै चढ्नु पर्छ हिमाल…
धौलागिरि हिमालको शिखर चुम्नै लागेका आरोही लाक्पा शेर्पा परिवार र आफन्तजनसँग खुसी साट्न आतुर थिए। तर एकाएक झस्किए। आफू उभिएकै अगाडि विदेशीको शव देखेपछि उनको उत्साह हरायो। ‘त्यो देखेपछि मेरो मन नै मरेर आयो। परिवार र आफन्तलाई फोन पनि गरिनँ’, उनले भने।
अघिल्लो वर्ष मे १८ मा ८ हजार १ सय ६७ मिटर आग्लो धौलागिरि चुचुरो चुमेका थिए उनले। ‘विदेशी नागरिकको यो शव करिब २० वर्ष पुरानो होला। ‘ती पर्वतारोही पनि मजस्तै उत्साहित भएका थिए होलान् चुचुरो चुम्दा’, पायोनियर एडभेन्चर ट्रेक प्रालि आरोही दलका प्रमुख लाक्पा शेर्पाले भावुक हुँदै सम्झे, ‘लमतन्न परेर ढलेको अन्दाजी ४५/५० वर्षका लाग्ने विदेशीको मृत शरीर देखेपछि मन खङ्ग्रङ्ग भयो।’
समस्या हिमालमा ढलेको विदेशी आरोहीको एउटा शवको मात्र हैन, अहिले आरोहण अनुमति दिइएका अधिकांश आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमा यस्तै बेवारिस शव बग्रेल्ती छन्। लाक्पा भन्छन्, ‘हिउँका खुड्किला नाघ्दै उकालो चढ्दा ठाउँठाउँमा शव कुल्चनुपर्ने अवस्था छ।’
विदेशी र नेपाली आरोहीका शव हिमालमा त्यत्तिकै छन्। आठ हजारमाथिका अधिकांश हिमालमा बाटैभरि प्रशस्तै शव भेटिन्छन्। चुचुरो चुम्ने लक्ष्यमा हिँडेका आरोही शव देख्दा झस्कँदै मन खिन्न पार्छन्।
पर्वतारोहण प्रशिक्षक संघका उपाध्यक्ष अर्का आरोही लाक्पा शेर्पाले चार वर्षअघि आफूसँगै आरोहणमा हिँडेका दोस्रो टोलीका तीनजना चिनियाँ धौलागिरि हिमालमै हराएको दुःखद् घटना सुनाए। ‘ती चिनियाँको शव खराब मौसामले गर्दा ल्याउन सकिएन, हिमालमै रह्यो’, उनले भने। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ।
‘अमेरिका छाड’ भन्दै इन्जिनियरको गोली हानी हत्या…!!!
पूर्वराजाका समर्थकले ‘नेता सबै विदेशी दलाल’ भन्दै नाराबाजी गरेपछि…!!!